State Counsellor and Foreign Affairs Minister receives Azerbaijani Amb – Ministry of Foreign Affairs
State Counsellor and Union Minister for Foreign Affairs Daw Aung San Suu Kyi received Azerbaijani Ambassador to Myanmar Mr Qaley Allahverdiyev at the ministry in Nay Pyi Taw on 23 August 2019 afternoon.
At the call, they exchanged views on the matters relating to strengthening bilateral relations and cooperation between Myanmar and Azerbaijan and the participation of Myanmar at the 18th Summit of Heads of State and Government of the Non-Aligned Movement (NAM) to be held in Baku, Azerbaijan, from 25 to 26 October 2019. The visiting Ambassador handed over the invitation letters to the State Counsellor to attend the Non-Aligned Movement Summit.
Also present at the meeting were Union Minister for International Cooperation U Kyaw Tin and the officials from the Ministry of Foreign Affairs.
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အဇာဘိုင်ဂျန် သံအမတ်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ခြင်း
(၂၃-၈-၂၀၁၉ ရက်၊ နေပြည်တော်)
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် မလေးရှားနိုင်ငံ၊ ကွာလာလမ်ပူမြို့ရှိ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အဇာဘိုင်ဂျန်သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Qaley Allahverdiyev ခေါင်းဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ၂၃-၈-၂၀၁၉ ရက်၊ (၁၅၀၀) နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် မြန်မာ-အဇာဘိုင်ဂျန် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေး ကိစ္စရပ်များ၊ ယခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၅ ရက်နေ့မှ ၂၆ ရက်နေ့အထိ အဇာဘိုင်ဂျန်နိုင်ငံ၊ ဘာကူးမြို့၌ ကျင်းပမည့် ဘက်မလိုက်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့၏ (၁၈) ကြိမ်မြောက် ထိပ်သီးအစည်းအဝေးသို့ မြန်မာနိုင်ငံမှ ပါဝင်တက်ရောက်ရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး၊ အဆိုပါ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးသို့ ပါဝင်တက်ရောက်ရန် ဖိတ်ကြားစာများကို နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အား သံအမတ်ကြီးက ပေးအပ်သွားကြောင်း သိရှိရပါသည်။